Ogaden News Agency (ONA) – Xaaladda Itobiya iyo Kaftankii (Joke) Ruushka ee Habar Dugaag – Noora Afgaab
Xaaladda Itobiya iyo Kaftankii (Joke) Ruushka ee Habar Dugaag – Noora Afgaab
Posted by ONA Admin	/ May 12, 2015
Shucuubta cadaadiska laga saaro xagga hadalka iyo siyaasadda waxay ku caan baxaan sheekooyinka yary ee qosolka loogu talagalay, hasa ahaatee lagu cabirayo xaalad siyaasadeed oo jirta. Waxaa kaftankaa (Joke) ugu horeeyay shacabka Ruushka iyo Masaarida. Waxaa ka mid ah kaftanka lagu qoslo;
Qorsha Shan-sandeed ah (5year Plan) ayaa la siiyay xayawaankii ku noolaa Ruushka, oo ahaa inay dhisaan Biya-xidheen weyn. Hawshii markay dhaxda u mareyso ayaa waxaa ka go’ay sibidhkii. Wada tashigii ayaa lagu go’aamiyay in Aw-Shabeel loo diro Moosko suu madaxda Kremlin warbixintaa ugu gudbiyo oo Xisbiga oga codsado in sibidh loo soo diro. Muddo yar ka dib ayuu soo noqday isagoo lasoo bahdalay oo la yidhi sibidhkii la’idiin qoondeeyay wuu ka badnaa ee sheega meesha aad ka iibsateen. Shir kale ayaa la galay, waxaana la go’aamiyay inuu odaygii ugu weynaa meesha oo Maroodi ahaa la diro suu ugu sharxo madaxda xisbiga khaladka dhacay inuu ahaa qorshihii hore. Intaan la dirin Shabeel iyo midkanba, Damiir meel xus ah fadhiya ayaa qaylinayay oo lahaa; war aniga i dira .. war aniga i dira, hasa ahaatee in loo diro dameer oo uu hor-fadhiisto madaxda xisbiga shuuciga ee ugu xooga badan caalamka way la noqon weyday bah dugaag. Maroodigii ayaa sii qaatay faylashii, maalma ka dib ayuuna soo noqday isagoo si kadaran loosoo bahdalay oo waliba la siiyay digniin inay mudadii loogu talagalay ku dhameeyaan mashruuca. Bah dugaag, waxaa la yidhi, waxba ku qasaari maynee aan dirno dameerkan qaaqda ku haya. Mudadii la filayay inuu kusoo noqdo markii la waayay ayaa la yidhi, meesha Shabeel iyo Maroodi wax ka keeni waayeen ayuu Dameer aaday, isaga waxaa lagu tuuray xabsi. Muddo ka dib ayaa waxaa la maqlay tareeno soo xiimaya iyo Aw-Dameer oo calanka lulaya oo dhakada ka saaran oo soo raray sibidhkii loo baahnaa. Wax lala yaabo ayay noqotay. Dameerkii ayaa la weydiiyay. Wuxuu yidhi war intaan idinka maqnaa oo idil waxaan ku jiray martiqaad iyo cabitaan. Nimanka xisbiga xukuma miyaad taqaanaan, sow ma’ah asaxaabtaydii aan isku meesha kusoo kornay.
Sheekada waxay u dhacaysaa inay madaxda xisbiga shuuciga la mid ahaayeen dameero, oo loola jeedo dabaqadii ugu hooseeyay mujtamaca oo awood helay. Xaalad la mid ah ayaa ka jirta Itobiya, waxaana xukunka haysta dabaqad aad u liidatay oo awood heshay, waxayna fahmi karaan un qof la mid ahaa oo dhaqankooda leh. Arinta waxaa sidaa iigu taxliiliyay nin oday ah oo ka mid ahaa saraakiishii Ruushka wax kusoo baratay. Wuxuu intaa raaciyay, Cabdi iley iyo kuwa xukunka Itobiya haya ee TPLF-ta ah waa isku dhaqan, oo taariikh nololeed isku mid ah ayay soo mareen, waana meesha ay wax ka fahmi la’yihiin mucaardka Cabdi iley.
Wuxuu yidhi; dadka noocaa ah ee dabqad hoose kasoo kacay, waa dad isfahmi kara oo isku mawjad ka hadla, sida dameerkii loo diray ayayna isugu gurmadaan haduu midkood ku habarwacdo. Jenenka Harar ee Gabre iyo Cabdi iley markay wada cabaan, waxaa laga yaabaa, inay ka sheekeystaan mid walba noloshoo soo maray iyo meeshuu hadda gaadhay, taasoo la mid ah inay iska kaashaadaan qofkii kusoo duula nololshooda. Marka nimanka ku kacsan Cabdi iley ee aqoonta leh ee uga sheekeynaya Itobiya dhibaatada uu ku hayo Cabdi iley dalka iyo dadka, waxaa ku gudban xidhiidhka hoose ee ka dhexeeya kooxdan, oo u arka qofkaan soo marin noloshooda inuu yahay qof duulan ku ah oo doonaya inuu dib ugu celiyo noloshay soo mareen. Shimbirba shimbirkiisuu la duulaa.